मानसिक स्वास्थ्य | Nagarik News - Nepal Republic Media
सुनिता खड्का ११ श्रावण २०७७ आइतबार १० मिनेट पाठ
सोमबारसम्म कुल संक्रमित १५ हजार नौ सय ६४ मध्ये ६ हजार आठ सय ११ जना निको भइसकेका छन्। निको भएको ठूलो संख्याले संक्रमित हुनासाथ आत्तिनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ। कोरोना निको भएका व्यक्तिले पनि ‘उच्च मनोबल’ राख्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
नागरिक २३ असार २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
आत्महत्या कसरी रोक्ने ?
सामाजिक संजालमा ‘म एक्लो महसुस गरिरहेको छु, म टाढा जान चाहन्छु, म मेरो सपनाको संसारमा हराउन चाहन्छु, मलाई अब बाँच्न पुग्यो’ आदि आशय बोकेका भनाइहरू देखेमा त्यसलाई बेवास्ता नगरौं । बरु तिनको सहयोगका लागि पहल गरौं।
सुनिता खड्का ६ असार २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बहस जरुरी छ’
बलिउड अभिनेता दीपिका पादुकोणले मानसिक स्वास्थ्यका बारे बहस आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । आइतबार सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै उनले वरपरका मानिसहरू निराश वा मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुन सक्नेहरूसँग कुराकानी गरेर मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकी थिइन ।
एजेन्सी २ असार २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
किशोरकिशोरी के चाहन्छन्, अभिभावकले कसरी सम्बोधन गर्ने?
उनीहरूले बढी समय आफ्नै बारेमा सोच्ने, धेरै ऐना हेर्ने, आफ्नो अनुहार र छालाबारे बढी संवेदनशील हुने गरेको पाइन्छ ।
सुनिता खड्का ३२ जेष्ठ २०७७ आइतबार ११ मिनेट पाठ
नागरिक १२ जेष्ठ २०७७ सोमबार ६ मिनेट पाठ
बढ्न थाल्यो मानसिक समस्या
गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा गएको समाजउकुसमुकुसको अवस्थामा छ । सहर, गाउँ, टोल मात्रनभएर प्रत्येक घरघरमात्रास देखिन्छ । छिमेकमासमेत आवतजावत टुटेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासले व्यक्तिको दिनचर्या एकतमासको बनेको छ । एकअर्कामा विश्वास टुटेको छ । शारीरिक समस्या देखाउने कोरोनाका कारण मानसिक समस्या बढ्न थाले पनियसतर्फ भने कसैको ध्यानपुगेको छैन ।
दिनेश सुवेदी ५ जेष्ठ २०७७ सोमबार १० मिनेट पाठ